Tijaabo Caafimaad oo Cusub oo loogu talagalay Daawaynta Kansarka qanjirka 'prostate'
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Tijaabo Caafimaad oo Cusub oo loogu talagalay Daawaynta Kansarka qanjirka 'prostate'
Hinova Pharmaceuticals Inc., oo ah shirkad heer-caafimaad biopharmaceutical ah oo diiradda saarey horumarinta daaweynta cusub ee kansarrada iyo cudurrada dheef-shiid kiimikaadka iyada oo loo marayo tignoolajiyada burburinta borotiinka, ayaa ku dhawaaqday in bukaankii ugu horreeyay ee qaba kansarka qanjirka 'prostate-u adkeysiga dheef-shiid kiimikaadka' Tijaabada caafimaad ee HP518, aad loo xushay oo afka laga heli karo kimeric degrader oo bartilmaameedsanaysa soo-dhowaynta androgen (AR). Summada furan ee socota ee Wajiga I ee Australia waxay qiimeyn doontaa badbaadada, farmashiyaha, iyo waxqabadka ka hortagga burada ee HP518 ee bukaannada qaba mCRPC.
HP518 waxa la helay oo soo saartay Hinova bartilmaansaneed ee burburinta borotiinka madal daahfurka daroogada. Waxay awood u leedahay inay ka gudubto iska caabbinta daawada kansarka qanjirka 'prostate' sababtoo ah isbeddellada AR ee gaarka ah.
Degraders Chimeric waa unugyo yaryar oo laba-shaqeeya kuwaas oo kor u qaada hoos u dhaca borotiinada bartilmaameedka leh ee leh awood sare iyo xulashada sare. Tignoolajiyadani waxay awood u leedahay inay beegsato bartilmaameedyada aan dawada lahayn iyo inay ka gudubto arrinta iska caabbinta daroogada ee dawooyinka molecule-yar ee dhaqameed.
"Tani waa guul muhiim ah oo laga gaaray horumarka dadaalkeena laga soo bilaabo baarista daroogada ilaa daraasadda bukaan-socodka," ayuu yiri Yuanwei Chen, Ph.D., Madaxweynaha iyo Maamulaha Hinova. "Waan ku faraxsanahay arrintaas waxaana u heellan inaan u keeno doorashooyin cusub oo daweyn bukaannada adduunka oo dhan!"
Iyada oo loo marayo goobta lagu helayo dawada baabi'isa borotiinka, Hinova waxay si degdeg ah u eegi kartaa nashaadaynta borotiinka waxayna ku guulaysan kartaa naqshad hufan iyo hagaajinta kuwa wax-jabiya chimeric. Intaa waxaa dheer, Hinova waxay khibrad qoto dheer u leedahay xakamaynta soo saarista kiimikaad ee xeryahooda degrader.
Kia EV6 Hadda Ku Guuleysata Gaariga Sanadka 2022 Gaarigee? Abaalmarino
Macluumaad cusub oo ku saabsan sida Is-dhaafsiga u dhexeeya Unugyada Pancreatic ay u keeni karaan Nooca Sonkorowga ee dhifka ah
Suuqa Premixes ee la Habeeyay 2022 Horumarka Caalamiga ah...
Suuqa Alaabta Intrauterine (IUI) waa ...
Suuqa Aaladaha Laparoscopic wuxuu ku fidayaa CAGR oo ah ...
Sandals Foundation oo magacaabay qoyska cusub ee Stewart...
Nasinta sambabbada oo la xoojiyey waxay caawisaa daawaynta fashilka sambabada
Explore Uganda oo guul weyn ka gaartay Filimka Dalxiiska Caalamiga ah...